Uchwepheshe we-Semalt uchaza ukuthi kungani kufanele usebenzise ukukhangisa kwevidiyo
Phakathi neminyaka eyishumi edlule, i-landscape ye-digital yenze okuningiizinguquko ezibalulekile. Abantu baphuma ngaphandle kokusebenzisa ama-desktops nama-laptops ukucinga okuqukethwe ku-intanethi. Kunalokho, manje sebekhethafor mobile phones kanye amaphilisi.
Ngenhlanhla, kulula ukuhambisana nezwe elishintshayo.Enye indlela enhle yokwenza kanjalo ngevidiyo yokumaketha, ifomu lokuncintisana lokuqukethwe. Kuleli zwe elihamba phambili, ukukhangiswa kwevidiyo kungenyeezinhlobonhlobo zokuqukethwe ku-intanethi enikeza abasebenzisi ngenani, ukubaluleka, nokuguquguquka abakudingayo - مؤسسات نقل العفش في الدمام.
Njengendlela eyodwa yokufuna ukukhangisa ngaphandle, ukumaketha kwevidiyokuvele into eyodwa okufanele uzame njengomthengisi uma ungayisebenzisi kakade.
uRyan Johnson, iMenenja Yokuthengisa Ephezulu i-Semalt Amasevisi weDivaysi, abelana ngezizathu zokuthatha ukumaketha kwevidiyo njengoba kuchazwe ngezansi.
1. Ikhuthaza Ukukhumbula Kwezimpawu.
Amavidiyo avame ukubuka kakhulu futhi ahlolisise. Ngenxa yalokho, kululaukuze abasebenzisi bakhumbule okuqukethwe kwevidiyo uma kuqhathaniswa nokuqukethwe okusekelwe embhalweni. Uma ikhasimende likhumbula okuqukethwe kwakho, uzokhumbula futhibrand yakho, ngaleyo ndlela eholela ekuthengiseni okwengeziwe ngawe. Amakhasimende angabelana ngamavidiyo athokozayo azokwandisa ukufinyelela kwakho kwe-intanethi.
2..Kuqinisa i-SEO yeSayithi Yakho.
Ukuhlangenwe nakho kwe-Semalt yokukhangisa kubonisa ukuthi imfanelo futhi efanelekileUkuqukethwe kwevidiyo kungathuthukisa kakhulu i-SEO yesayithi yakho ngokuqondisa abasebenzisi ekhasini lakho. Ngaphezu kwalokho, kungathuthukisa futhiAmanani wokuguqulwa ngaleyo ndlela athuthukisa amazinga akho okuchofoza phakathi kwebhodi.
3. Yenza kahle kuwo wonke amadivaysi.
Namuhla, ukushayela ukudayiswa kwedijithali kuyisabelaukuklama. Uma okuqukethwe kwenkampani kuhluleka ukwenza kahle kusiphequluli esinikeziwe noma idivayisi, ibhizinisi eligijima lizolahlekelwa eziningiumgwaqo futhi ngenxa yalokho, kuhlaselwa izinga lokuchofoza-ngezinga. Ngenhlanhla, okuqukethwe kokukhangisa kwevidiyo kulungile ngokugcwelekungakhathaliseki ukuthi iyiphi idivayisi oyisebenzisayo.
4. Uqinisa umlayezo wakho weBrithani.
Ngokusebenzisa ukumaketha kwevidiyo ye-inthanethi, unethuba elikhulu lokuthuthukisaumlayezo uqhutshwa umkhiqizo wakho futhi uthuthukise inkampani yakho. Kuyinto ithuluzi elihle ukuvumela amakhasimende akho ukuthi ungubani ngokululaizici ezinjengokufaka uphawu lomkhiqizo nokuklama kanye nezici eziyinkimbinkimbi ezifana nokuqukethwe nezwi.
5. Okuqukethwe kwevidiyo kungasheshe kuhambe nge-viral.
Iningi labantu abasebenzisa amavidiyo aselula bavame ukuwabelana nabanyeabantu. Lezi zinani ziphakeme kakhulu kunamazinga wabelana ngokuziqhenya ezinye izinhlobo zokuqukethwe ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, iningi labantukungcono ukubandakanya okuthunyelwe kwevidiyo uma kuqhathaniswa nokuthunyelwe kombhalo. Ngenxa yalokhu, okuqukethwe kwevidiyo kuyithuluzi elinamandla kakhulunoma yikuphi umkhiqizo ngenhloso yokwandisa ukufinyelela kwayo kwe-intanethi.
Ngokudala okuqukethwe kwevidiyo okunolwazi olunamandla, kufinyelelekefuthi kulula ukuxhumana nabo, umkhiqizo ungathuthukisa okulandelayo okukhulu futhi uthuthukise ikhasimende ukukhumbula. Ibuye inekhono lokuthintaizilaleli zakho ezingeni lomuntu siqu kanye nokugqugquzela ukuthengisa okuqhutshwa emoyeni. Amakhasimende afuna ukuzizwa kahle ngokukhetha abakwenzayoukwenza, nokukhangisa kwevidiyo, uma kwenziwa kahle, ingenye yezindlela ezingcono zokudala lo mzwa.